Changzhou Lingdian Wood orinasa naorina tamin'ny 2003. Ny fototra faritra dia 80.000 metatra toradroa. Isika no nitarika orinasa eo amin'ny sehatry ny vinyl Flooring, wpc vinyl Flooring sy ny spc Flooring any Shina.
Fa vinyl Flooring, ny fahafahantsika dia mihoatra ny 150 fitoeran isam-bolana; Fa wpc vinyl Flooring. Ny fahaiza-dia mihoatra ny 150 fitoeran isam-bolana; Fa spc Flooring, ny fahaiza-manao dia mihoatra ny 50 kaontenera isam-bolana.
Ny orinasa alread nandalo ny rafitra fitantanana ISO9001 taratasy fanamarinana kalitao, ISO14001 rafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ny taratasy fanamarinana taona taratasy fanamarinana avy amin'ny orinasa TUV fitiliana. Tsy nahazo ny fanamarinana fahazoan-dalana ny Unilin ho an'ny laminate Flooring sy vinyl Flooring. Tsara milina famokarana, tsara milina sy ny fitsapana henjana mifehy tsara foana ny vokatra eo amin'ny kalitao avo lenta.
Ny loharanon-karena be sy ny fanondranana olona traikefa, ny fitantanana mandroso ho antsika ravaka tena mifaninana amin'ny orinasa. Isika amin'izao fotoana izao hanondrana 95% ny famokarana an'i Etazonia, Kanada, Amerika Atsimo sy Atsinanana Eoropa sy ny sisa. Ny kendrena dia ny hanome miovaova sy entana faran'izay tsara ho anao sy hahatonga ny fiainanao tsara kokoa.
Tonga soa eto amin'ny namana maneran-tany mba hitsidika ny orinasa ho an'ny fiaraha-miasa bebe kokoa.